सीमावर्ती क्षेत्र: हाम्रो साझा सौम्य शक्ति
सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रको परिवेश भिन्न छ। दैनिक मजदूरीदेखि बीउबिजन, औषधोपचारदेखि मलामी, सत्यनारायण पूजा होस् वा विवाह एकअर्कामाथि निर्भर छन्।
किन आवश्यक छ पर्यावरण संरक्षणमा नारीवाद?
महिलाले प्रकृतिलाई बुझ्छन्। प्रकृतिमा नयाँ जीव र वनस्पतिको जन्म, हुर्काइ र हेरचाहलाई नजिकबाट महसूस गर्न सक्छन्। त्यसैले पुरुष सिर्जित जलवायु परिवर्तन समस्याको समाधानका लागि पनि नारीवादी पर्यावरणको अवधारणा आवश्यक छ।
मोहपाश/ ठूला कुराको भाउ “कमोन मा, आई वान्टु प्ले विद् यु, लेट्स प्ले,” नातिनी बुरुक्‌बुरुक् उफ्रेर भन्थी। चुनमाया ट्वाँ पर्थिन्।
तस्वीरमा मनमोहक मनाङ
पूर्णविराम तिमी छेउ नगइरहन पनि सक्दिनँ, बसिरहन पनि सक्दिनँ। तिमीबाट टाढा हुँदा पनि पोल्छ मन। छेउ हुँदा त झन् ग्लानिले भतभती पोल्छ।
नेपाल-चीन नदी सहकार्य नेपाल-भारतबीच पानी छलफल जुन तह र तप्कामा हुने गर्छ, नेपाल-चीन सम्बन्धको छलफल भने शून्यप्रायः छ।
पुरुष ‘दबंग’ अनि महिला चाहिं ‘जिस्म’!
फेमिनिज्म भन्नु पुरुषलाई गाली गर्नु या पुरुषलाई सक्नु होइन, दुवैले पाउने अधिकारको समानता हो, समान अवसर होस् भनी लागिपरेको विद्रोहको चित्कार हो।
संस्कृतिको प्रकृति नै परिवर्तनशील छ, तर संस्कृति जोगाउने नाममा अमानवीय थोत्रा र पुराना चलनलाई बोकिराख्नु पनि त्यसका विरुद्ध हिंड्नु हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालद्वारा ५ असोजमा काठमाडौंमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव:
'अष्टलक्ष्मी कमरेडकै लागि विद्रोहको शुरूआत गरेका थियौं' नाम र चुनाव चिह्नले फरक पर्दैन। कुनै वेला माछामा त कुनै वेला हँसिया हथौडामा भोट हालिएको थियो। अब अर्को चुनाव चिह्नमा भोट हालौंला।
कहिले पढ्न पाउने नेपालमै राजनीतिक मनोविज्ञान? सकारात्मक सोचले डोर्‍याउन र राजनीतिक विकृति कम गर्न पनि हाम्रा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक मनोविज्ञानको अध्ययन-अध्यापन शुरू गर्न आवश्यक भइसकेको छ।
जनगणनाको तथ्यांकलाई विकासमा उपयोग गर्न कसले के गर्ने? योजना निर्माणका लागि तथ्यांकको उपयोग गर्ने परिपाटी बसाल्न पनि आगामी कात्तिक-मंसीरमा हुने १२औं जनगणनाको स्थानीय तहसम्म पैरवी गर्न जरुरी छ।
बीपी र महेन्द्रले किन बनाए सैन्य ‘कू’ को योजना? [आर्काइभ] बुबा राजा त्रिभुवनले साली रत्नसँग विवाह गर्न नदिएका कारण युवराज महेन्द्रले बीपीसँग सहयोग मागे। बीपीले युवराजको प्रेमका खातिर राजा विरुद्ध सैन्य ‘कू’ सम्मको योजना बनाए। तर, उनै महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीलाई ‘कू’ मार्फत गलहत्याए।
जग्गा नहुँदा राज्यले बनायो अनागरिक राज्यले आफ्नो समस्या प्रति चासो र चिन्ता नदेखाए पनि सुकुम्बासीले नागरिक हुनुको दायित्व भने पूरा गरेका छन्। अचम्म त के भने, सबै सुकुम्बासीले घरधुरी कर तिरिरहेका छन् जब कि कानूनी रूपमा उनीहरूसँग न जग्गा छ, न त घर।
जसको सवाल, उसकै पहिलो आवाज संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा दलित समुदायका महिलाहरूको सहभागिताले उनीहरूको क्षमता र नेतृत्व विकास गर्दै दलितको मुद्दा पनि उठाएको छ।
पहिचानको राजनीति नै विभाजनको बीउ नेपालमा सँगसँगै उठेका आवाज हुन् संघीयता र पहिचानको राजनीति। संघीयता त कार्यान्वयनमा छ, अब यसमा पहिचानको राजनीति थपियो भने समाज विभाजनको बाटोतिर नलाग्ला भन्न सकिन्न।
बालबालिकामा मोटोपनको ‘महामारी’ घरका पौष्टिक खानेकुरा छाडेर बजारका जंक फूड खाने प्रवृत्तिका कारण बालबालिकाहरू मोटोपनको शिकार मात्र भइरहेका छैनन्, उनीहरूको शारीरिक विकासमै असर परेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनदबाब राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै दलहरूका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जनदबाब पनि खासै देखिएको छैन।
भास्कराचार्यका पर्याय नयराज जीवन पर्यन्त इतिहास, ज्योतिष शास्त्र आदि विषयको चिन्तनमा लागेका नयराज पन्तलाई भारतका प्रख्यात गणितज्ञ र ज्योतिषी भास्कराचार्यकै पर्यायका रूपमा चित्रण गर्दा कम होला, बढी हुँदैन।